ल्याण्डफिल्ड साइडमा फोहोर फाल्न अवरोध, कारण के हो ? – Gandaki Voice
टोटेनहम एफए कपको पाँचौँ चरणमा
प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्न घुम्ती शिविर
Home/गण्डकी/ल्याण्डफिल्ड साइडमा फोहोर फाल्न अवरोध, कारण के हो ?
ल्याण्डफिल्ड साइडमा फोहोर फाल्न अवरोध, कारण के हो ?
पोखरामा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित ल्याण्डफिल्ड साइडका स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिने भन्दै आन्दोलन शुरु गरेपछि यस्तो समस्या आएको हो ।
साविक पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ र हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ का स्थानीयले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्दा महानगरले ध्यान नदिएर सो क्षेत्र नै दुर्गन्धित भएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
साथै उनीहरुले पोखरा १४ को विकास निर्माणमा महानगरले उचित ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरेका छन् । उनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । समितिले २० वर्ष अघि उपमहानगरपालिकासंग भएको २८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
ल्याण्डफिल्ड साइड प्रभावित जनसरोकार समितिले एक साता अघि वडा कार्यालय र महानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्नो समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर महानगरपालिकाले आफूहरुको समस्यामा बेवास्ता गरेकाले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको समितिका संयोजक बोधबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै ल्याण्डफिल्ड साइड प्रभावित जनसरोकार समिति ।
उनले २० वर्ष अघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिए । संयोजक कार्कीले सकिन्छ सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, सकिन्न ल्याण्डफिल्ड साइट अन्यत्रै सार्न चुनौती दिए । आफूहरु अब कुनै पनि हालतमा चूप लागेर नबस्ने भन्दै उनले फोहोरका गाडी यस क्षेत्रमा आउनै नदिने बताए ।
कार्यक्रममा समितिका तत्कालिन संयोजक गोकर्ण कार्कीले आफूहरुलाई महानगरपालिकाले शुरुआती चरणदेखि पेल्दै आएको भन्दै अब कुनै पनि हालतमा चुप लागेर बस्न नहुनेमा जोड दिए ।
उपाध्यक्ष ललित बाँनियाँ, सचिव नारायण प्रसाद भण्डारी, सदस्यहरु खड्क विक, शिव प्रसाद पोखरेल, तिलकराम लम्साल, डिबी राई, खाल्टे मसिना क्लबका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर गुरुङ, मसिना टोल विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र सुवेदी, आमा समूहकी अध्यक्ष ईन्द्रमाया बानिया लगायतले बोलेका थिए ।
छिट्टै छलफल शुरु हुन्छ : वडाध्यक्ष कार्की
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले संघर्ष समितिसंग बसेर छलफल गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । उनले संघर्ष समितिसंग आफूले केही दिन समय माग गरेको पनि समय थप्न नमानेको बताए ।
‘उहाँहरुले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएर निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमा समय थप गर्न भन्दा मान्नु भएन’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो विषयमा मेयरसावसंग कुरा भइरहेको छ । अबको एक दुई दिनमै उहाँहरुसंग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
यो समस्या उहाँहरुको मात्र होइन समग्र पोखरेलीको साझा समस्या भएको उनले स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘पोखरा १४ मा विकास नै नभएको भन्न मिल्दैन तर सोचेजति हुन नसकेको साँचो हो ।’ ल्याण्डफिल्ड साइडमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न पोखरा र महानगरपालिका लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे ।
समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र
समितिसंग तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको २८ बुँदे सम्झौता
कति बढ्यो सगरमाथाको उचाई ?